Wool Wiricheya Chivharo: Kubatsira uye Matipi Ekutarisira
Kune mumwe munhu ari wiricheya yakasungwa, shinda wiricheya kufukidza pamusoro pe chigaro pamutsago ichapa yakawanda nyaradzo. Inobatsira nekuchengetedza muviri kutonhorera muzhizha uye kudziya munguva yechando.
Nekuda kwehunhu hwayo hwakapfava uye hukuru hunodzivirira zvivakwa, nyanzvi dzinofunga kuti mvere isarudzo huru ye wiricheya zvifukidzo. Kupfuurirazve, kune shinda yekunze inodzorera mvura nepo mukati iri kunotora mwando.
Makushe Chinhu Chikuru che wiricheya Covers
Shinda rine chinhu chikuru chekugona kutora mwando kubva kumhepo yakatenderedza. Iko kunotora kunoitika zvishoma nezvishoma uye kunogona kutora zvakaringana se25% yehuremu hwayo. Iyo mvere inodziya sezvo kunwa kuri kuwedzera.
Isati yatanga kunzwa kunyorova, mvere dzinogona kutora mwando wakawanda. Inoomawo zvishoma nezvishoma; saka mupfeki haazonzwa kutonhora sezvo ichioma. Sezvo makushe aine kugona kwechisikigo kwekutora hunyoro kubva mudenga, iwo wakasarudzika murazvo wemoto.
Makushe anowanikwa kubva kunzvimbo dzinoverengeka senge Alpacas neLlamas vane mvere dzakapfava, dzakareruka uye dzakasimba zvichienzaniswa nemvere dzemakwai. Asi makushe emakwai anowanikwa zvirinyore. Kubatsira kwaLlama neAlpacas mvere ndechekuti havawani mabhati emakemikari kubvisa zvipukanana.
Mvere dzadzo hadzina makemikari akaita senge machena uye dhayi. Asi ukuwo kushoma nekuti vanogona kubatwa nekudyiwa netumbuyu twemapfunde nemapete.
wiricheya zvivharo zvakagadzirwa neAlpaca kana Llama mvere dzinofanirwa kuchengetwa dzakachena uye matanda emisidhari anogona kushandiswa kuchengetedza zvipembenene. Kuti uenderere mberi nekuvhara chifukidzo chemvere kana chisiri kushandiswa, chengeta muhombodo yakavharika. Bhegi redonje rinorega makushe achifema uye nekurichengeta kubva pakuwana fungus chakuvhe neforoma.